Iza No Tomponandraikitra Amin’ny Famaranana Ny Herisetra Ara-Nofo Ao Somalia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2018 2:23 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Français, Ελληνικά, Português, Italiano, polski, русский, Deutsch, 日本語, Nederlands, 繁體中文, English
Vehivavy nafindra tao anatiny ihany, tao amin'ny Tobin'i Madina. Sary an'i Faaris Adam
Tamin'ny volana Oktobra 2017, voadaroka tao amin'ny “faritry ny maoja” noho ny fandàvany ny fandrabirabiana ara-nofo nataon'ny mpanafika azy tao amin'ny tanànan'ny seranana tao Bosaso,, Somalia, i Faiza Mohamed Abdi, 16 taona. Naratra mafy tokoa i Abdi noho ny nataon'i Abdikadir Warsame, miaramilan'ny hery fiarovana ao Puntland, faritra mizaka tena amin'ny ampahany ao Somalia. Hatramin'ny volana Desambra 2017, notsaboina tao amin'ny hopitaly tao Tiorkia i Faiza. Mitatitra ny Radio Dalsan fa:
Voalaza fa i Faiza dia nosetrasetrain'ny miaramila iray avy ao amin'ny tafika an-dranoamasin'i Puntland saika hanolana azy raha iny tao an-tanànan'i Bosaso iny izy saingy nitolona mafy nanohitra ilay mpanafika azy anefa izy. Tamin'ny fahatsapany fa tsy ho vitany ny asa ratsiny, notifirin'ilay miaramila antsoina hoe Abdikadir Warsame tany amin'ny maha-vehivavy azy ary nitarika ratra goavana ho azy izany. Nalefa tany Mogadiscio izy nony avy eo mba ho tsaboina, nefa indrisy, nilaza ireo mpitsabo fa ilàna fitsaboana manokana izay tsy vitan'izy ireo i Faiza.
Mampalahelo, tsy irery i Faiza. Na niezaka aza tato ho ato ny sasantsasany tamin'ireo faritra mizaka tena amin'ny ampahany ao Somalia mba handany ireo lalàna mikasika ny fanolànana, ny kolontsaina ankapobeny momba ny tsimatimanota dia manome vàhana ireo mpanolana mba tsy ho voasazy – ary dia mitobaka ireo tantaranà fanolanana.
Fanolanana any anatin'ireo toby natao ho an'ireo olona nafindra toerana ao anatin'ny fireneny ihany [Internally Displaced People (IDP) ]
Ao Somalia, ady an-trano sy hanohanana naharitra efa ho roapolo taona mahery no nanosika ireo olona marobe handositra ny fonenany ary hipetraka any amin'ireo toby natao ho an'ny olona nafindra. Ireo vehivavy sy tovovavy izay miaina any anatin'ireo toby ivelan'ny tanàndehibe no tena fadiranovana noho ny fanolanana. Tsy manam-piarovana izy ireo ary ny ankamaroan'ireo tranganà fanolanana dia mitranga mandritra ny alina na rehefa maka kitay any anatin'ireo faritra mihataka izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, noho ny firodanan'ny rafitra fitsaràna ady heloka bevava, matetika tsy mahazo fanohanana ara-pitsaràna ilainy ireo trà-doza mba hikatsahana ny rariny.
Fiican 45 taona, reny mananotena sy Buulo Ba'alay mponin'ny toby IDP, dia voaolana teo anatrehan'ireo zanany. Notantarainy teo amin'ny tafatafa niarahana tamin'ny GV ny zava-nitranga, tamin'ny filazàna fa:
Misasakalina tamin'izay raha iny nisy olona nitam-piadiana nanao fanamian'ny mpitandro filaminana Puntland nmaky ny tranoko, nisintona mahery ahy hivoaka ary nanolana ahy. Tsy vitan'ny nanolana fotsiny izy, fa nampijaliany koa aho sady navelany niaraka tamin'ny ratra goavana teo amin'ny vatako, izay mbola maharary foana hatramin'izao.
Ny alina nitrangan'ny herisetra tamin'i Fiican, lehilahy avy ao amin'ny polisin'i Puntland no nandeha tany amin'ny tobin'ny Bula Bacley IDP tao an-tanàna afovoan'i Galkayo. Nitsofoka ankeriny tany anatin'ireo tranolay ireo lehilahy ireo, naka an-kery an'i Fiican sy reny iray. Voaolana avokoa ireo vehivavy roa ireo. Mampalahefo fa tsy mbola niatrika fitsaràna mikasika ny fanolanana izay nahazo azy foana ireo tra-doza. Nosamborina ireo mpanolana saingy sady tsy voaheloka no tsy voasazy mikasika ireo heloka bevava vitany.
Araka ny voalazan'ireo mpiaro ny zon'olombelona ao Puntland, tranga 80 mikasika ny fanolanana no voaray tao amin'ny faritra mizaka tena amin'ny ampahany ao Puntland any Somalia, tamin'ny taona 2017. Heverina avo be ny isa tena izy mikasika ireo fanolanana satria, maro ireo tsy sahy miteny noho ny tahotra ny fanilihan'ny fiarahamonina, ny tsy fahampian'ny fahatokisana ny rafitra fitsaràna heloka bevava sy ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa voaomana ho fikarakarana ny fahasalamana.
Ankoatra ireo olana mikasika ny fitsaràna, sakana iray ihany koa ho an'ireo tra-dozan'ny herisetra ara-nofo ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa ho an'ny fahasalamana, ireo fitaovana maoderina sy ny fampitaovana ilaina eo amin'io sehatra io. Tsy ampy ihany koa ny mpiasa matihanina eo amin'ny sehatry ny fahasalamana misahana ireo tranga-na fanolanana.
Ny kolontsaina eo an-toerana ihany koa dia anisany sakana amin'ny fitsaràna noho ny fombafomba eo amin'ny faritra izay manery an'ireo tra-doza hanambady an'ireo mpanolana azy na hanaiky an'ireo ” rameva na biby fiompy” ho takalon'ny nanaovana herisetra azy ireo.
Manerana ny tontolo ny fanolanana ary matetika vitavita fotsiny tsy misy sazy any amin'ny ankamaroan'ny faritra ao Somalia, izay noho ireo taompolo nifandonana sy noho ireo andrim-panjakana natao hampanaja ny lalàna lasa mihamarefo dia nahazo vahana ny kolontsain'ny herisetra. Amin'ny ankapobeny, terena hanaiky ny takalo ireo niharan'ny fanolanana – matetika amin'ny endrika rameva na biby fiompy – ary manambady an'ireo mpanolana manaraka ireo fomba tranainy efa an-jato taona narafitra mba ho famaranana ny ady misy eo amin'ireo foko mpifahavalo.
Dingana kely mankany amin'ny lalana tena izy? – saingy ampy ve?
Ny 9 Septambra 2017, lasa lohateny goavana tamin'ireo gazety ny faritra mizaka tena amin'ny ampahany ao Puntland rehefa nanokatra ny laboratoarany voalohany fitsirihana araka ny lalàna mba handalinana ireo tranga mikasika ny fanolanana tao an-tanàn'i Garowe.
Ny taona talohan'izay, tamin'ny Septambra 2016, i Puntland no fari-pitantanana voalohany tao Somalia nandany ny lalàna iray manohitra ny fanolanana. Naneho ny fanohanany tamin'ny alalan'ny latsabato 42 amin'ny 45 ireo mpikambana tao amin'ny Parlemanta tamin'ny nifidianany ilay volavolan-dalàna izay navadika ho lalàna ofisialy taoriana kelin'izay.
Ny 6 Janoary 2018, nanaraka ny ohatra nasehon'i Puntland ny Parlemantam-panjakana Somaliland ary namolavola lalàna vaovao iray ihany koa manohitra ny fanolanana. Na izany aza, mbola lavitra ny lalana hizorana mialohan'ny handalovan'io ny Guurti (Efitranon'ireo Olobe) sy ho soniavina ho lasa lalàna.